AJA သည် OG-X-FR openGear®သဟဇာတဖြစ်သော Rackframe ကိုမှာကြားရန် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » AJA သည် OG-X-FR openGear®သဟဇာတဖြစ်သော Rackframe ကိုအမှာစာအတွက်ရရှိနိုင်သည်
AJA သည် OG-X-FR openGear®သဟဇာတဖြစ်သော Rackframe ကိုအမှာစာအတွက်ရရှိနိုင်သည်
မြက်ချိုင့်, ကာလီဖိုးနီးယား။ (ဇူလိုင်လ 30, 2018) -Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ ယနေ့ကုမ္ပဏီဩဃ-X-FR, လာမယ့်မျိုးဆက် openGear အဘို့အမိန့်ကိုလက်ခံခြင်းကြောင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်® သည်အခြား features တွေအကြားသပ္ပါယ်အအေးနှင့်အပိုပါဝါအပါအဝင်သဟဇာတ rackframe ။
ထုတ်လွှင့်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအတွက် openGear စံဘက်လျက်ဆက်လက်အမျှ "Aja ခေတ်သစ်လုပ်ငန်းအသွားအလာတောင်းဆိုချက်များကိုဖြေရှင်းရန်ကြောင်းဖြေရှင်းချက်နှင့်အတူ၎င်း၏ openGear ထုတ်ကုန်လိုင်းတိုးချဲ့ဖို့ဂုဏ်ယူသည်။ ဩဃ-X-FR ဖောက်သည်ရောက်စေဖို့တစ်ချောမွေ့ပြောင်လက် frame ကိုသို့သစ်ကိုလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို pack မှာပါဝါတိုးတက်နှင့် 4K, 12G-SDI နှင့် IP ပမာဏကိုင်တွယ်များအတွက်အအေး, "နစ်ခ် Rashby သမ္မတကလည်း, Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ.
ဩဃ-X-FR Aja နှင့်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှ openGear ကတ်များနှင့်သဟဇာတဖြစ်မယ့် 2RU, 20-slot က rackframe ဖြစ်ပါတယ်။ frame ကို frame ကိုအမည်, အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်သက်ဆိုင်ရာသတိပေးချက်နှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကိုအသိပေးသောမျက်နှာစာ panel ကိုတခုတခုအပေါ်မှာဘက်ပေါင်းစုံ LCD display ကိုတပ်ဆင်ထားပါသည်။ ဒါဟာနှစ်ဦးကိုရှေ့-loaded ပူ-swappable ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများ, လွတ်လပ်သောအအေးပန်ကာနှင့်အတူအသီးအသီး, LED အခြေအနေနှင့် Front-တပ်ဆင်ထားပါဝါ switch ကိုမှတက်ထောက်ခံပါတယ်။ Dashboard ဆော့ဖျဝဲတစျဆငျ့ထိန်းချုပ်ရေး Aja ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် Dashboard-သဟဇာတ openGear ကဒ်များရိုးရှင်းသော configuration များ, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးပေးပါသည်။
Key ကို features တွေပါဝင်သည်:
2 openGear ကတ်များမှတက်ဘို့စွမ်းရည်နှင့်အတူ 20RU ဘောင်
အဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍအအေး, optional ကို 600 နှင့်အတူ2ဝပ် power supplynd လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ
အမည်, အိုင်ပီလိပ်စာနှင့်အမှားဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်တပ်ဦး LCD display ကို
တူဘောင်အတွက် Analog စ, ဒစ်ဂျစ်တယ်, ဗီဒီယို, အသံ, SDI နှင့် IP module တွေအဘို့ပံ့ပိုးမှု
လွယ်ကူသောပန်ကာဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအဘို့အ removable အိမ်ရှေ့တံခါးများနှင့်လေကြောင်းစစ်ထုတ်
setup ကို, ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဘို့စံ Dashboard ထိန်းချုပ်မှုစနစ်အား
optional SNMP ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် DataSafe ကဒ် backup လုပ်ထားနှင့် restore
ဩဃ-X-FR $ 1449 အမေရိကန် MSRP များအတွက် Aja ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ပြန်လည်ရောင်းချသူများကွန်ရက်မှတဆင့်အမိန့်အဘို့အရရှိနိုင်ပါသည်။ တစ်ခုက optional ကိုမလိုအပ်တဲ့ power supply, ထိုရှင်ဘုရင်ဩဃ-X-PS ကိုလည်း $ 659 အမေရိကန် MSRP များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းအရာ Aja ဗီဒီယိုစနစ်များ, Inc
1993 ကတည်းက Aja ဗီဒီယိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လွှင့်, ဗွီဒီယိုနဲ့ post ထုတ်လုပ်မှုစျေးကွက်မှအရည်အသွေးမြင့်, ကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သောထုတ်ကုန်ဆောင်ခဲ့, ဗီဒီယို interface ကိုနည်းပညာများ, converters အဖြစ်, ဒစ်ဂျစ်တယ်ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကင်မရာများတစ်ဦးဦးဆောင်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ခဲ့သည်။ Aja ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မြက်ချိုင့်, ကယ်လီဖိုးနီးယား၌အကြှနျုပျတို့၏အဆောက်အဦမှာအများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်စနစ်များပေါင်းစည်းတစ်ခုကျယ်ပြန့်ရောင်းအားရုပ်သံလိုင်းမှတစ်ဆင့်ရောင်းချကြသည်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်အဘို့, ငါတို့၏ website မှာကြည့်ပါကျေးဇူးပြုပြီး www.aja.com.
News Feed တွေကို
News Feed တွေကိုအားဖြင့်နောက်ဆုံးပေါ်ရေးသားချက်များ (အားလုံးကြည့်ရှု)
Bridge Digital သည် 4K HEVC Encoding Solution ကို AJA KONA5ဖြင့်သဘောပေါက်သည် - သြဂုတ်လ 12, 2020
NiTRo သည် 8K Editing လုပ်ငန်းအသွားအလာ AJA ၏ KUMO 3232-12G 12G-SDI Router နှင့်အတူလုပ်ဆောင်သည် - သြဂုတ်လ 5, 2020
Atech Flash Technology သည် AJA Pak Media Reader အသစ်ကိုပြသခဲ့သည် - ဇူလိုင်လ 16, 2020
12G-SDI 4K အသံလွှင်း ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထုတ်လွှင့်အင်ဂျင်နီယာ ထိန်းချုပ်ရေးစနစ် Dashboard ip openGear post ကိုထုတ်လုပ်မှု rackframe SoftAtHome, MStar, CES2017 လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2018-07-30
ယခင်: ALBTELECOM NEW IPTV ဝန်ဆောင်မှုများကိုစတင်ရန် ANEVIA ရှေးခယျြ
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လုပ်အင်ဂျင်နီယာချုပ် - ဓာတုထုတ်ယူခြင်း & ပန်းကန်